Isazi sezengqondo sizochaza isifo sebele ngesimo sokuhlangenwe nakho okuthandayo kwabathandekayo. Ukuze uphulukise, udinga "ukuyeka" isimo. I-mammologist izokweluleka ngokuziqapha okujwayelekile. Ubani olungile? Ngamunye - ngendlela yayo. Ukuvimbela nokwelashwa kwe-cystic ukukhathazeka - isihloko sesihloko sethu.
Uye wabhekana nezindlela eziphumelelayo kakhulu zokukhathazeka. Yiziphi? Ukukhulelwa nokulahlwa! Okungenani, yilokho odokotela bama-mammology abakhuluma ngayo ngalezi zinqubo. Phela, cishe noma yikuphi uhlobo lokukhathazeka kuningi lwezimo ezibangelwa izifo ze-hormonal. Phakathi nesimo esimangalisayo esifanayo, wonke ama-hormone ahlangana ngokuvumelana. Ngakho-ke, lesi sifo sinqamuka. Kodwa ngabe ubuya noma cha kuncike kuwe. Ukucindezeleka, ukulala, ukungondleki okungalungile, izingubo zangaphansi ezingenakulungiswa yizihlobo ezingcono kakhulu zesifo. Uzwa izibonakaliso zokuqala zenkinga, ungabufihli ikhanda lakho esihlabathini (awusona intshe!), Futhi uye kumchwepheshe. Ngesikhathi sokuqala, ukuyeka ukukhathazeka kulula futhi ngokushesha.
Ukusuka ekutheni umzimba uvele kanjani
Isakhiwo sebele, naphezu kokubaluleka kwemisebenzi yaso, silula. Izicubu ezixhumeneyo, ezinamafutha futhi ezinamafutha (okukhiqiza ubisi). Ngakho, ukukhathazeka yisimo lapho ama-tissu webele ashintsha khona. Isibonelo, izicubu ezixhumeneyo noma ezibandayo ziyanda. Leli fomu lesifo libizwa ngokuthi i-diffuse. Mhlawumbe ukwakheka amabele amancane esifubeni (uma uzizwa bebukeka sengathi amaqanda). Bakhuluma nge-fibrocystic ukukhathazeka ne-predominance yama-cysts (ama-vesicles agcwele amanzi). Isimo singashintshwa: ezicukwaneni azikho ama-cysts, kodwa fibroadenomas - ama-sealings aminyene, ajikelezayo. Izicubu ezixhumeneyo zanda, futhi ukuxilongwa kanje kulandelayo: "Ukubhekwa kwe-fibrocystic nge-fibrous component." Njengokwesabisa njengoba kuzwakala, udinga ukwazi ukuthi lesi sifo siphathwa. Amafayili ama-cystic ngisho nama-fibrous ezinyathelweni zakuqala afaneleke ngokuphelele amalungiselelo asemakhaya. Ngokukhula okunamandla kwe-fibroids, basuswa ngokuhlinzwa. Umsebenzi omfushane, ushiya isibazi, obukhulu ngezinwele. Kodwa lokhu kuyingozi kakhulu. Kubalulekile ukungabambezeli ngokuvakashela udokotela. Into yokuqala ochwepheshe abayoyincoma: i-ultrasound noma i-mammogram yezigulane zamabele (mhlawumbe kokubili). Uzokunika uhlu lokuhlolwa kwamahomoni (kulungiselelwe, kuzoba isikhathi eside). Ngaphezu kwalokho, uchwepheshe uzoba nombuzo mayelana nempilo: kungakhathaliseki ukuthi kunezinkinga ngegciwane le-thyroid, ama-adrenals, isibindi, ama-ovari. Ukuhlukumeza kwalezi zitho kuvame ukuholela ekukhathazeni. Ngempela, bonke bahlanganyele ekulondolozeni isizinda se-hormonal. Enye yemibuzo engathandeki yomtholampilo wezilwane: kwakukhona yini ukukhipha isisu esikhathini esidlule? Cishe zonke zazo zibangela ukukhathazeka esikhathini esizayo. Udokotela uzocacisa ukuthi ubeletha isikhathi eside kangakanani nokuthi ngabe kunezinkinga yini ngaphambi kokukhulelwa. Konke lokhu kuyadingeka ukuze uthole ukuthi imbangela yesifo. Lena yindlela ewukuphela yokucabanga ngamasu wokwelapha.
Ukuqala ukwelashwa, udokotela uyazikhethela. Okokuqala, uzobheka imiphumela yokuhlolwa, i-ultrasound ne-mammography. Izidakamizwa ze-hormonal ziyobekwa uma ukulinganisela emzimbeni kuphazamiseka. Kungenzeka ukuthi ochwepheshe uzobeka umyalelo wokubeletha ngomlomo evamile. Ekubunjweni kwawo, kune-hormone, okungase kube ngokwanele ukuxazulula le nkinga. Esinye iseluleko sikadokotela nakanjani siyokujabulisa. Yenza uthando njalo! Ngempela, ngaphandle kwalokhu, isizinda semvelo se-hormonal asikho! Namuhla, ukusetshenziswa kabanzi futhi okusetshenziselwa kakhulu ukwelashwa kokukhathazeka kuyizinto zokulungiselela izitshalo ezihlelekile. Unomphumela wokuphefumula ongenakwenzeka futhi cishe awukho imiphumela emibi. I-Homeopathy isebenza, kodwa kancane kancane. Kubalulekile ukuba ube nesineke futhi uthathe imithi ngokusho kwalolu hlelo. Ungadeleli izindlela zabantu. Amahlamvu eklabishi, agcoke uju, afake esifubeni ebusuku. Khetha ilineni engacindezeli esifubeni sakho, kepha isekela. Kungcono ngaphandle kwemigodi. Ngokuvamile ukwelashwa kokukhathazeka kuyaqala ngakolunye uhlangothi. Isibonelo, baphatha ama-ovari noma isisu. Ngenxa yalokho, isifo sesifuba siphinde sidlule, ngoba sibangelwa ukuphazamiseka komsebenzi kulezi zitho.
Kubalulekile ukuhlola izilonda ezincelisayo ezinyangeni zonke. Uma uphethiwe eshaweni, hamba iminwe yakho eduze kwesifuba kusukela embonini kuya ngaphandle, bese - kumbuthano. Kuthola izibonakaliso? Kubalulekile ukubona udokotela! Uzokhetha ikhambi elihle. Futhi okubaluleke kakhulu, unomuthi omuhle esitokisini. Yiba umama futhi.
Umthelela wokukhulelwa kwe-hormonal ekukhulelweni okuzayo
I-Endometritis: izimpawu kanye nokwelapha. Ukukhulelwa ne-IVF ku-endometrium
Ukusabela Okubi Kwezidakamizwa
Izinkinga zemetaboliki: izimbangela nezimpawu
Uyini umphumela womgqomo womsedari?
Ubulili ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa
Izakhiwo ezikhohlisayo ze-nettle
Iyini ukusetshenziswa kwe-avocado?
Ungashintsha kanjani isimo somyeni wakhe?
Yoga ngesisu esiswini
ULera Kudryavtseva noSergei Lazarev bahlabelela okokuqala i-duet, ividiyo